Channel Istanbul, Istanbul ရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအာမခံ? | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်, အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအာမခံဖြစ်လာကြသနည်း
06 / 01 / 2015 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်, ထိုအစ္စတန်ဘူလ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အာမခံတူရကီရေလက်ကြားနှင့်အတူ Marmara ပင်လယ်ပြင်ပါဝင်ပါသည်ထားတဲ့အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Canakkale ရေလက်ကြားမှဖြစ်ရပြီလိုပင်လယ်နက်မြေထဲပင်လယ်ဆက်သွယ်ထားသောသာရေလမ်းရှိသည်ဖို့တာတော့သေချာတယ်မဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါမှုဖြစ်ပါတယ်။ တူရကီရေလက်ကြားအဖြစ်ပင်လယ်နက် riparian နိုင်ငံများ၏လိုအပ်ချက်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးစစ်ရေးလုံခြုံရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကိုအရေးကွီး၏။ ရေလက်ကြား, ပင်လယ်နက်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်မှာ၏နိုင်ငံများတွင်ဆက်သွယ်ထားသောအဓိကကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
မဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါမှုအဖြစ်ကောင်းစွာအများအပြား features တွေ sahiptir.ilk အဖြစ်ကကမ်ဘာပျေါတှငျတူရကီရေလက်ကြားမျှသည်အခြားဥပမာသယ်ဆောင်အဖြစ်အစ္စတန်ဘူလ်ရေလက်ကြား, သမိုင်း၏ 3000 နှစ်နှင့်ယူနက်စကို "ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်" ကသန်း 12 ကျော်လူဦးရေနှင့်အတူမြို့တော်အစ္စတန်ဘူလ်၏ဗဟို, ကြေငြာအဖြစ်, ရေခဲပြင်ဒိုးပစ်မွို့၌အများဆုံးသမိုင်းဝင်သောနေရာများထဲကဖြတ်သန်းရတယ်။ အဆိုပါ Bosphorus အော်တိုမန်ကာလ၏ကမ်းခြေပေါ်တွင်အိမ်ရာများ၏ဗိသုကာများ၏အများဆုံးထူးချွန်ဥပမာအကြားဆောက်ထားတဲ့နှင့်လည်း Bosporus ၏ထူးခြားသောအလှရှင်းလင်း။ ယနေ့အိမ်ရာများ၏ကျယ်ပြန့်အများစုနေဆဲနှစ်ဦးစလုံးတူရကီအတွက်စျေးအကြီးဆုံးအိမ်ခြံမြေအကြားဖြစ်ကြအစ္စတန်ဘူလ်နှစ်ခုစလုံးကိုမွို့, သူတို့ရဲ့အဟောင်းအမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်။ အများဆုံးကောင်းစွာ Bosphorus အိမ်ကြီးပေါ် Hasip Pasha Mansion မသိ, Muhsiniza, Ahmed က Fethi Pasha Mansion, လက်နက်တိုက်မာရှယ် Zeki Paşa Mansion, Cypriot Mansion, Tahsin Bey Mansion, Ostrorog Mansion Count, မှူးမတ် Burhanuddin သခင်ဘုရား Mansion အတွက် Mansion, ကြော့ Mustafa Pasha Mansion နှင့် Nuri Pasha အဆိုပါ Mansion အဖြစ်စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင်; ထိုသူတို့သည်များစွာသောခမ်းနားဘုံဗိမာန် Bosphorus အော်တိုမန်ကာလအတွင်းတည်ဆောက်ထားခဲ့ကြသည်။ Dolmabahce နန်းတော်, Ciragan နန်းတော်, Beylerbeyi နန်းတော်, Küçüksu Pavilion, Pavilion ဆူလ်တန်၏ Adil Kasrı Beykoz ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောထူးခြားတဲ့ဗိသုကာများ၏ Bosphorus တဦးတည်းကိုအခြားလူသိများဥပမာအဖြစ်သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦများ၏ဂါလာတာတက္ကသိုလ်, အီဂျစ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးနှင့် Sakip Sabanci ပြတိုက်။
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ပင်လယ်နက် Bosphorus မြေထဲပင်လယ်နိုင်ငံများဖို့ထွက်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။ အာရှနှင့်အတူဥရောပတိုက်ကြီးကတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေခွဲထုတ်သဘာဝရေလမ်းကြောင့်ရှေးခေတ်ကကျန်ရှိသောမဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါမှုရှိပါတယ်။
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Bosphorus ၏ 29,9 ကီလိုမီတာအရှည်, Marmara ၏ဝင်ပေါက်မှပင်လယ်နက်ဝင်ပေါက်ကီလိုမီတာ 4.7, 2.5 ကီလိုမီတာအများစုသည် (Kandilli-Rumelihisarı-ကလေး) ၏မြောင်အမှတ်တစ်ခုဖြစ်သည် 700 မီတာကျယ်ပြန့်သည်။
ရေကြောင်းနှင့်အတူချွန်ထက် 45 မှတက်၏ 80 ဒီဂရီများ၏ရှေ့မှောက်၌ Bosporus တလျှောက်အများဆုံးပြင်းထန်သောတဦးဖြစ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအသွားအလာ, အ Kandilli 12 ဒီဂရီနှင့်Yeniköyနှင့်နေရာများနာရီ 7-8 အရေးပါမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌, geomorphology နှင့်ရေကုထုံးနှင့်အတူရှုပ်ထွေးစီးတက်ကီလိုမီတာအရှိန်မြှင် ဒါဟာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ကြောင်းဒေသဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းတစ်အတော်လေးကျဉ်းမြောင်းပြီး meandering ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါတယ်။
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Bosphorus ဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာအများကြီးရေတွင်းများနှင့်ခုံတန်းရှည် (ရေတိမ်ပိုင်း) နဲ့ရေအောက်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အပြည့်အဝဖြစ်မြင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သောမြောက်အမေရိကအဘိဓါန် South ဦးတည်ချက် 50 မီတာ၏လည်ချောင်း Isobath (တွဲဖက်အတိမ်အနက်ကိုခါးဆစ်) တစ်ကျင်းဖြစ်ပေါ်လာသော traverses ။ အဆိုပါ Bosphorus ၏ရုတ်တရက်ကျဉ်းလေ့လာမှုများနှင့်ထစ်အတိမ်အနက်ကိုလေ့လာမှုများကိုတှေ့မွငျရာဒေသများရှိ။
ဒါကြောင့်အပေါ်အစ္စတန်ဘူလ်ရေလက်ကြား, ပင်လယ်နက်နှင့်မြေထဲပင်လယ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေကွဲပြားခြားနားသောအဖြစ်, ဆားငန်, အပူချိန်နှင့်။ နှစ်ခုတို့သည်ပင်လယ်ပေါင်းစည်းကြောင့်အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အတူစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ, လေထုအစုလိုက်အပြုံလိုက်အပင်နှင့်တိရိစ္ဆာန်မတူကွဲပြားမှုကုန်းပတ်ဝန်းကျင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပါတယ်အလွန်အထူးဂေဟစနစ်အခြေအနေများဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စတန်ဘူလ်ရေလက်ကြားတို့သည်အဏ္ဏဝါဗေဒပညာရှင်များကရေစီးကြောင်းကိုရည်မှတ်အရေးကြီးဆုံးအချက်တခုဖြစ်ပါသည်။ လှိုင်းတံပိုး, ထိုကဲ့သို့သော Bosporus အတွက်အဏ္ဏဝါအသွားအလာအပေါ်သက်ရောက်မှုကဲ့သို့သောအခြားအဏ္ဏဝါဗေဒပညာရှင်များကအချက်များမှတက်ဒီရေရေစီးကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ လည်ချောင်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ (ကျဉ်းမြောင်းနှင့် tortuous ရှိသည်) မြစ်၏အရေးပါမှုကိုတိုးပွားစေပါသည်။ အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်ရေလက်ကြားကို hydrologic အခြေအနေများအောက်တွင်ဖွံ့ဖြိုးသည်အခြားလည်ချောင်းထဲမှာ input ကိုအဖြစ်မိုးရွာသွန်းမှု-ရေငွေ့ပျံခြင်းနှင့်စမ်းချောင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထမ်းရွက်။ Black ကမိုးရွာသွန်းမှုနှင့်ဆိုလိုတယ်ကြောင့် input ကိုမှဖွံ့ဖြိုးသောအစ္စတန်ဘူလ်ရေလက်ကြားစီးအတွက်ပြင်းထန်မှုကိုထမ်းရွက်။
လက်ျာဘက်ကပြင်းထန်လေတိုက်နှုန်းအောက Black ပင်လယ်နက် Marmara Marmara lodos ကနေပုံမှန်ဆင်းဖို့ပြန်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒေသအလိုက်, "orkoz" အဲဒါကိုခက်ခဲဟုချေါသောဤရေစီးကြောင်းနှင့်ခရုဇ်သင်္ဘောများစီမံကိုင်တွယ်ရန်စေသည်။
အဆိုပါဝင်ပေါက်များတွင်စီးဆင်းပင်လယ်နက်မျက်နှာပြင်လက်ရှိအဆိုပါ Marmara vortices ကမ်းရိုးတန်းအနီးဒေသများတွင်လှည့်ဝင်နှင့် Marmara ကနေပင်လယ်ထဲသို့စီးသောအောက်ခြေစီးရှိပါတယ်။ တည်နေရာနှင့်အခြေအနေများပေါ် မူတည်. ကွဲပြားသောပင်လယ်မျက်နှာပြင်ကနေဒီအောက်ရေစီးအနက်။ အချို့နေရာများနှင့်အခြေအနေများအတွက်ပင်လယ်မျက်နှာပြင် 10 တစ်နာရီမိုင်အောက်မှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် undertow, ရေဆုတ်ခွာအပျက်သဘောဆောင်သောလမ်းအတွက်ထက်ပိုမိုကြီးမားသော-အရွယ်အစားတန်ချိန်သင်္ဘောများနှင့်လေ့ကျင့်မှုလုပ်တာလဲ၏သင်တန်းသက်ရောက်သည်။
ပင်လယ်နက်ရေသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း Bosporus ဖြစ်ပါသည်, သမုဒ်ပူးတွဲဖြစ်ပါတယ်။ ရေလက်ကြားတစ်ချိန်တည်းမှာပင်လယ်နက်နှင့်မြေထဲပင်လယ်တို့အကြားအရေးပါသောဇီဝစင်္ကြံဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအား Black နဲ့အမဲရောင်ကနေ Marmara Marmara ၏ရာသီပေါ် မူတည်. နေပါသည်ရေရွှေ့ပြောင်းအပါအဝင်ငါးထုတ်ကုန်။
ပင်လယ်နက်, အ Bosphorus အပေါ် Marmara အစ္စတန်ဘူလ်၏ပင်လယ်ပြင်ဟာ Dardanelles နှင့် Aegean ပင်လယ်ကနေတဆင့်မြေထဲပင်လယ်ကိုဆက်သွယ်။ ကြောင့်မြင့်မားတဲ့ရေဘတ်ဂျက်မှအပေါများမိုးရေချိန်, ပင်လယ်နက်၏မျက်နှာပြင်ရေထဲမှာလျော့နည်းရေငွေ့ပျံခြင်းနှင့်မြေပြင်ရေချို input ကိုကဒီအကြောင်းပြချက်, ပိုလျှံအတွက် Bosporus မှတဆင့် Marmara ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ကအမြဲမှန်ကန်စွာစီးဆင်းဘာ '' ကိုပြသ။ ပင်လယ်နက်ရေလက်ကြား၏ငန်ရေထဲမှာကောင်တာ-လက်ရှိစနစ်ကအောက်ခြေမှမြေထဲပင်လယ်အင်တုံသမုတ်သော။ (လည်ပတ်၏တန်ပြန်လက်ယာရစ်ဦးတည်ချက်အတွက်) တစ်ဦးအကြီးစားပတျဝနျးကငျြတစျခုလုံးကိုပင်လယ်နက်ကမ်းခြေဆိုင်ကလုန်းတစ်လျှောက်လုံးအခါခြုံငုံစီးဆင်းမှုစနစ်ကကသံသရာလေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည်။
မျက်နှာပြင်နှင့်အောက်ခြေရေစီးကြောင်းအားဖွငျ့အချင်းချင်းကပ်လျက်အပြန်အလှန်သို့မဟုတ်ပင်လယ်, မိုးလေဝသအခြေအနေများ, ဇလဗေဒဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်။ ပင်လယ်၌ဖြစ်ပေါ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုအပြောင်းအလဲများကိုမဆိုပင်လယ်အခြားတွင်ထင်ဟပ်နေသည်။ Kmxnumx ရေ Marmara ပင်လယ်ပြင် 548 နှစ်ပင်လယ်နက်ထဲကနေဖြတ်သန်း,3အဆိုပါ Marmara ပင်လယ်အောက်ရေစီးမှပင်လယ်နက်ထဲကနေသက်ဆိုင်ရာရေကျမ်းပိုဒ်နှင့်အတူလည်ပတ် kmxnumx ။
ဤသည်လေထုညစ်ညမ်းမှုအကြောင်းကို2၏အစိုင်အခဲအချိုးမှ Marmara ပင်လယ်နက်, Marmara ပေါ်ပေါက်မည်ကိုပြသထားတယ်ပင်လယ်နက်အပေါ်ပိုပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသာသက်ရောက်သည်။
အသုံးပြုမှုလမ်းပြတိုက်ရိုက်သွားတာရေယာဉ်နှင့်ဆှဲသငျေ်ဘာဗိုလ်မင်းအားဖြင့် Montreux ရက်စွဲပါ 1936 ၏ Bosporus ရေလက်ကြားကွန်ဗင်းရှင်းများတွင်ကျဉ်းမြောင်းသောအရာကမ္ဘာ့အများဆုံးအန္တရာယ်များကိုသဘာဝရေလမ်း, သီးခြားအန္တရာယ်ပါဝငျသောပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ရပါမည်။ အစ္စတန်ဘူလ် Bosphorus ရေလမ်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ features တွေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကမ္ဘာပေါ်မှာအခက်ခဲဆုံးသင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါရေလက်ကြားထဲမှာအားကောင်းတဲ့ရေစီးကြောင်း, ချွန်ထက်အလှည့်နဲ့ variable ကိုရာသီဥတုအခြေအနေအညွှန်းအလွန်ခက်ခဲ။ ဒါကြောင့်အညွှန်းများအတွက်ကမ္ဘာ့အခက်ခဲဆုံးနှင့်အန္တရာယ်ရှိရေလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Bosphorus အတွက်အလွန်အလုပ်များသင်္ဘောအသွားအလာနေသော်လည်း။ နှစ်တွေပျမ်းမျှ 50.000 10.000 သင်္ဘော toggle နှင့်သင်္ဘောရေနံနှင့်ရေနံဆင်းသက်လာပစ္စည်းများတင်ဆောင်လာသောရေယာဉ်များပါဝင်ပါသည်။ တူရကီရေလက်ကြား 360 တန်ချိန်သန်းတစ်နှစ်မှတဆင့်ပို့ဆောင်ကုန်တင်၏ပမာဏပျမ်းမျှထက်ကျော်လွန်။ ဤငွေပမာဏ၏, အန္တရာယ်ရှိသောကုန်တင်၏ 143 တန်ချိန်သန်းဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။
အစ္စတန်ဘူလ် Strait MARMARA အရှေ့တောင်အာရှနှင့်သင်္ဘောမတော်တဆမှုသိသာစေသော
ကြောင့်အထက်ပါများ၏ပါဝင်မှအခြားကမ်းရိုးတန်းနှင့်ကုန်းတွင်းပိုင်းရေလမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ယာဉ်မတော်တဆမှုများအန္တရာယ်ဖို့ Bosporus ရေလက်ကြားကိုကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဓိကပင်လယ်မတော်တဆမှုအတိတ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ပါပြီအဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းများနိုင်-အရှုံးပြင်းထန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုများရှိခဲ့သည်။ ပင်လယ်မှာအများစုကမတော်တဆမှု;
အဆိုပါ Bosphorus Istinye ပတေရုသ Verovitz (ယူဂိုဆလပ်) နှင့်နှစ်ဦးကိုရေနံတင်သင်္ဘောတိုက်မိအမည်ရှိကမ္ဘာ့သဟဇာတ (ဂရိ) ၏ရှေ့မှောက်၌ -14.12.1960 ။ ရလဒ်ရေနံတင်သင်္ဘောကြောက်မက်ဘွယ်သောမီးထွက်ဖဲ့နှင့်ရေနံတန်ချိန်ပင်လယ်ထဲသို့သှနျးလောငျးလည်းရှိခဲ့သည် erupts ။ 20 လူများမတော်တဆမှုသေဆုံး
ယိုဖိတ်လောင်စာဆီပင်လယ်၌တိုက်မိသည့် 01.03.1966 -2 ရုရှားသင်္ဘောများတွင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် Kadikoy Kadikoy ကူးတို့ဆိပ်ခံတံတားမီးရှို့ခံခဲ့ရခဲ့သည်။ Lutsk, ဆိုဗီယက်အလံနှင့် Kransky နှင့်အတူတိုက်မိပင်လယ်ထဲသို့ရေနံတန်ချိန်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
- Haydarpasa အနီးတွင်တိုက်မိ Evrial လွတ်လပ်သောရေနံတင်သင်္ဘောနှင့်အတူ 15.11.1979 ယားဂရိအလံရေနံတင်သင်္ဘော၌။ ဆီ 95 တထောင်တန်ချိန်လည်ချောင်းထဲသို့သွန်းလောင်းလေ၏။ 43 လူများပေါက်ကွဲရေနံတင်သင်္ဘော Independente ၌သေကြ၏။ ဒါဟာ2လအတွင်းမီးကိုယူ။
မတ်လ 14 -1994 Nassima နဲ့ Sean ပွဲစားအပေါ်ဂရိရေနံတင်သင်္ဘောတိုက်မိ။ သေလွန်သောသူတို့သည် 27 ။ ရေနံစိမ်း 10.000 တန်ချိန်မီးရှို့ရာဖြစ်ပါတယ်
-29.12.1999 ရုရှား Volgoneft-248, မြေယာ hit မှ lodosl တွင်, ပိုင်းခြားခဲ့သည်။ လောင်စာဆီ 1600 တန်ချိန်များစွာကိုပင်လယ်သတ္တဝါများနှင့်ငှက်များလည်းကျောက်တန်းပျက်စီးသည်သဲကမ်းခြေကွန်ကရစ်အဆောက်အဦများအတွက်ကမ်းရိုးတန်း၏ရေနံ7ကီလိုမီတာအတွင်းဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်ပင်လယ်ထဲသို့ဖိတ်။
အစ္စတန်ဘူလ်၏ရေလက်ကြားအတွင်းဖြစ်ရပ်များလည်ချောင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါမတော်တဆမှုများ၏သက်ရောက်မှုကွောငျးဖျောပွသ; ပင်လယ်ကိုတူသောအကြီးစားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု, ကြီးမားသောမီးလောင်မှု, အစုလိုက်အပြုံလိုက်သေဆုံးမှု, ရလဒ်များကိုလူနေမှုလုံးဝမျိုးသုဉ်းများမှာပေါ်ထွန်းစေခြင်းငှါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်လယ်၏လေးရှည်လျားသောကြောင့်ရေသက်တမ်းတိုးကာလ "တံခါးပိတ်ပင်လယ်ဖြစ်ရကြမည်" ကိုပင်လယ်ထဲသို့စွန့်ပစ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သုံးစွဲအချိန်ကိုထက်ကိုပိုပါတယ်။ တစ်ဦးကအချိန်ကြာမြင့်စွာကဒီသက်ရောက်မှုကိုဖယ်ရှားပစ်ရလိမ့်မယ်။
ထို့အပြင်; သမိုင်းအထိမ်းအမှတကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါထိခိုက်ပျက်စီးမှုစဉ်းစားမတော်တဆမှု၏အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့သမိုင်း, ပင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောအစ္စတန်ဘူလ်အဖြစ်သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တစ်ဦးကစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုအလွန်ဆင်းရဲခံရပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်သူမျှမကျင့်သောအကျင့်လူသားတို့၏ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များဖြစ်လိမ့်မည်နှင့်အကြောင်းမရှိရက်စွဲတစ်ခုအလယ်၌ဖျက်မှုများ၏အန္တရာယ်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စတန်ဘူလ် CHANNEL စီမံကိန်း၏အရေးပါမှု
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Bosphorus သည့်အစ္စတန်ဘူလ်တူးမြောင်းစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရေး secure ရန်အရေးကြီးပါသည်ကလာတို့အားထင်ရှားလေ၏။ "Dardanelles နှင့် Bosporus သဘာဝလိုင်းများဖြစ်၏ channel များကိုနှစ်ပေါင်းထောင်ချီလွန်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဒီထက်အခြားအဘယ်သူမျှမလိုင်းများလည်းရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောစူးအက်တူးမြောင်းအဖြစ်ပနားမား။ ဒါ့အပြင်အတူတကွကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်အတူကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချအချိန်အသုံးအနှုန်းများအတွက်ငွေစု, ထင်ကြောင်းသေချာစေရန်နှင့်အသက်မှရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုစီမံကိန်းကိုဖြစ်ကြသည်။ ပြီးသားပင်လယ်နက်နှင့်အတူ Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်, Marmara ၏ပင်လယ်ပြင်အကြားတစ်ဦးအတုရေလမ်းနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်၏ရေလက်ကြားအတွင်းသင်္ဘောအသွားအလာသက်သာရာနိုင်ရန်အတွက်မြေထဲပင်လယ်ပင်လယ်နက်အကြားတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာတံခါးပေါက် ... အားလုံးကုန်တင်ယာဉ်အသွားအလာအတွက် Bosphorus မရှိဘဲတောင်ဘက်မှမြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါကြေညာချက်အရ, အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ရုပ်သံလိုင်း၏တရားဝင်အမည်, မြို့ဥရောပဘက်ခြမ်းအတွက်အကောင်အထည်ဖော်ပါလိမ့်မည်။ မြေထဲပင်လယ်လောလောဆယ်မှပင်လယ်နက်ပင်လယ်နက်အတွင်းသင်္ဘော Marmara ၏ပင်လယ်ပြင်အကြားတစ်ဦးအတုရေလမ်းဖွင့်လှစ်ရန်ပြိုင်ဘက်ကင်းဂိတ်ဝေးနှင့်အတူ Bosporus အတွက်အသွားအလာသက်သာရာနိုင်ရန်အတွက်။ channel 2023 နှစ်ပေါင်းထူထောင်ခံရဖို့မျှော်မှန်းနှစ်ခုအသစ်သောမြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းနှင့်အတူမြစ်ဆုံမှာ Marmara ပင်လယ်ပြင်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ channel ကို၏ 40-45 ကီလိုမီတာအရှည်; 145-150 မျက်နှာပြင်အကျယ်မီတာနှင့်ခြေရင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 125 မီတာရှိလိမ့်မည်။ ရေအတိမ်အနက် 25 မီတာရှိလိမ့်မည်။ ဤချန်နယ် Bosporus တလျှောက်တွင်လုံးဝရေနံတင်သင်္ဘောအသွားအလာပိတ်ထားပါလိမ့်မည်, အစ္စတန်ဘူလ်သစ်နှစ်မျိုးကိုကျွန်းဆွယ်၌, ကျွန်းသစ်တစ်ခုကောင်းစွာထားရှိရေးပါလိမ့်မယ်။
ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်သမိုင်းနှင့်အတူတူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်း, ယဉ်ကျေးမှု, ရပ်တည်မှုစီးပွားဖြစ်မြို့အစ္စတန်ဘူလ်စီးပွားဖြစ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများနှစ်ဦးစလုံးကိုတိုးပွါးစေရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ channels အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် ပတ်သက်. ဟုဆိုနိုငျ: အစ္စတန်ဘူလ် Channel ကို, အစ္စတန်ဘူလ်၏ရေလက်ကြားရေနံတင်သင်္ဘောအသွားအလာထဲကနေ recover လုပ်ဖို့စဉ်းစားသည်။
တစ်ဦးအစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပပါလိမ့်မည်ထိုချန်နယ်, အ Bosphorus နှင့်သင်တန်း၏သမိုင်းတန်ဖိုးနှင့်ယင်းဒေသ၏လူတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရင်ဆိုင်ရမယ့်ကြီးမြတ်စိုးရိမ်ရေမှတ် recover ပါလိမ့်မယ်။ တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်မှတဆင့်ဒီမှာ Bosporus မှတဆင့်ကျမ်းပိုဒ်နျူကလီးယားဗုံးနှင့်ညီမျှအတွက်တထောင်ရေနံတင်သင်္ဘော 10 ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်နှင့်အန္တရာယ်ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ် ...
Ã Emberyol Ist Istanbul အသွားအလာသို့…
မီးရထားစီမံကိန်းအစည်းအဝေးဆွဲဆောင်မှုများ၏ Tuncelide သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်
Adapazari Karasu မီးရထားစီမံကိန်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးခြင်းအစီအစဉ်အတွက်ရောက်ရှိ
မြန်နှုန်းမြင့်ရထား၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု Edirne အတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်
ပင်လယ်ကွေ့ Crossing တံတားအတွက် Tarhan CHP, လိုသည် 120 £သေဆုံးသူ
ပင်လယ်ကွေ့ Crossing တံတားကြိုးရယူပါ Gebze MI ဖွစျသှား
တင်ဒါကြေငြာချက် - Ankara မက်ထရိုမီထရိုရထားတွဲများအတွက်တတိယရထားစွမ်းအင်သုံးစုဆောင်းသူ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: İZBAN Inc က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအာမခံန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေး
တင်ဒါအသိပေးချက် - မိုဘိုင်းမီးရထားယာဉ် ၈ စီးအတွက်အာမခံဝန်ဆောင်မှုများ (TCDD 8 ko
တင်ဒါအသိပေးချက် - IETT ယာဉ်များတွင်ခရီးသည်များအားမတော်တဆထိခိုက်မှုအာမခံ ...
အဆိုပါ Mersin-Adana မြန်နှုန်းမီးရထားလိုင်းများအတွက်ပထမဦးဆုံးတူးဒီလပစ်သတ်လိမ့်မည်
တူရကီ-Sivas မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားခရီးသွားလာအချိန်နာရီကနေနာရီမှလိုင်းအတွက် 122မှ